Hery Rajaonarimampianina : “Mila ilay fahaterahana vaovao i Madagasikara” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Mila ilay fahaterahana vaovao i Madagasikara”
Tonga nanotrona ny andro lehibe fankalazana ny fanombohan’ny taom-piasana 2018 sy fitrotroana am-bavaka ny filohan’ny FJKM (Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara), ary fotoam-bavaka amin’ny faha-50 taonan’ny FJKM ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta, izay notarihin’ny praiminisitra, omaly tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Hipoka tanteraka ny kianjaben’i Mahamasina tamin’izany. Nanomboka tamin’ny 10 ora sy 30 mn maraina kosa ny fotoam-bavaka lehibe, izay notarihin’ny mpitandrina Zarazaka Jean Louis.
Nisy ny fifandimbiasam-pitenenana torian’ny fotoam-bavaka, ka anisan’ny nandray fitenenana voalohany tamin’izany ny Filoham-pirenena. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa mila ilay fahaterahana vaovao i Madagasikara. Nambarany fa efa ao anatin’ny fisandratana mantsy ny firenena amin’izao fotoana izao. “Izay fisandratana izay no ahafahana milaza fa efa ao anatin’ny fampandrosoana isika. Atao ny ady amin’ny kolikoly izay tena nambotry ny firenena tao anatin’ny taona maro, sns”, hoy ny Filohan’ny Repoblika.
Voalaza ihany koa fa tsy amin’ny maha Filoham-pirenena azy velively no nanotronany ny fotoam-bavaka tetsy Mahamasina fa amin’ny maha kristianina. Noho izay indrindra, naverimberin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandraisam-pitenenana ny tena fanevan’ny FJKM amin’ny hoe “Vokiso Filazantsara ny Nosy Madagasikara”. “Manana adidy ny kristianina, manana adidy ny mpitandrina, manana adidy amin’ny firenena avokoa isika rehetra”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Aza menatra manao politika
Ankoatra izay, dia nanipy hafatra ho an’ireo mpino FJKM marobe tonga tetsy Mahamasina ihany koa ny filohany, Irako Andriamahazosoa. Tamin’izany indrindra no nilazany fa tsy tokony ho menatra manao politika ny mpino. “Aza menatra manao politika. Politika amin’ny maha kristianina izay ho an’ny firenena”, hoy ity filohan’ny FJKM ity.
Nanipy teny amin’ny fandraisana andraikitra ihany koa ny tenany tamin’izany. “Sahia mandray andraikitra. Mandehana mifidy ary fidio ny Filoha matahotra an’Andriamanitra”, hoy ny filohan’ny FJKM, Irako Andriamahazosoa.
Mifono sy mahalaza zavatra be dia be izany hafatry ny filohan’ny FJKM izany. Indrindra amin’ny fampirisihina ny mpino kristianina amin’ny fandraisana andraikitra sy amin’ny fanatanterahana ny adidy masina amin’ny firenena amin’ny fandehanana mifidy amin’ny fotoana izay hanatanterahana izany.